Wararka Maanta: Khamiis, Dec 5 , 2013-Madaxweynaha Puntland oo cambaareeyey qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari
"Waan cambaarayneynaa falkaas; iyo ciddii fuliysey; iyo ciddii ka dambeysey iyo cidddii ku faraxday intaba....Ilaahey cadaabtii hakaga aarsado..." Madaxweyne Faroole ayaa yiri.
Ciidamada ammaanka iyo bahda caafimaadka ayuu iyagana ammaan ballaaran usoo jeediyey, isagoo tilmaamay in ay karti iyo dadaal dheeri ah muujiyeen.
Ugu dameyntii wuxuu ugu baaqay dadka reer Puntland in ay midnimadooda sii xoojiyaan, islamarkaana ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo ammaanka iyo nabadgelyada khatar gelin karta.
Qaraxa maanta magaalada Boosaaso ka dhacay oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaa fuliyey qof isa soo miidaamiyey, waxaana lala bar-tilmaameedsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamo ka tiran kuwa badda ee Puntland.
Inta la xaqiijiyey siddeed qof ayaa qaraxaas ku geeriyoodey, waxaana ku dhaawacmay 37 oo u badan shacab sidoo kalena ay dhowr askari ku jiraan.